नेकपा : पार्टी मिल्यो तर मिलेन मन – MeroJilla.com
देशभर आफ्नै पार्टीका धेरै नेता–कार्यकर्तालाई आश्चर्यमा पार्दै तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जेठ ३ गते पार्टी एकता गरे । कैयौँ नेताको असन्तुष्टिबीच जब ओली र प्रचण्डले दुई पार्टीलाई एकतामा धकेले, त्यसबेला बहस भएको थियो– पार्टी एकता त भयो, अब तत्कालीन एमाले र माओवादीका नेता–कार्यकर्ताको मन चाहिँ कहिले मिल्छ ?
महासचिव पौडेल भन्छन्, ‘निःसन्देह मन मिलाउने प्रश्न जटिल र कठिन विषय नै हो । खासगरी असोज १७ गतेपछि हामी जसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रस्तुत भयौँ । साझा चुनाव चिन्ह, साझा घोषणा पत्र र साझा उम्मेदवार लिएर जनताका माझमा जाने हामीले जुन अभ्यास ग¥यौँ, त्यसदेखि यता हाम्राबीचमा मन मिलाउनका लागि त्यति धेरै कठिनाइ उत्पन्न भएन ।
नेकपाले सरकार चलाउँछ कि सरकारले नेकपा ?​
१७ असोजमा प्रदेश र सङ्घीय चुनावका लागि बामगठबन्धन बनाएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी कार्यकर्ताबीच निकटता सुरु भएको थियो । त्यसपछि उनीहरू एकअर्काका पार्टीका गतिविधिसँग नजिक भएर ‘भावना’ जोड्ने काम थालेका थिए । चुनावमा बामगठबन्धनलाई सफलता मिलेपछि जेठ ३ मा पार्टी एकता गरेका थिए, जुन घटना कतिपयका लागि कल्पनाभन्दा बाहिरको थियो ।
कार्यकर्ता तहमा मात्र किन ? नेकपाका हालका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीचको विगत पनि त्यति समुधर सम्बन्धले भरिपूर्ण होइन् । बरु, उनीहरूको विगतको सम्बन्धमा मिठाभन्दा तीता अनुभव धेरै छन् । तर अहिले यी दुई नेताबीचको सम्बन्ध हालसम्मकै सुमधुर रहेको निकट नेताहरू बताउँदै आएका छन् । विगतमा पार्टीभित्र एकल नेतृत्व गर्ने शैली बनाएका ओली र प्रचण्डले संयुक्त नेतृत्व कसरी दिन्छन् ? यो चाहिँ निरन्तर उठिरहने प्रश्न हुन सक्छ ।
उदाहरण २– पार्टी कार्यालयमा आवत जावत पातलो
३० असारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवम् पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री मोहम्मद मुस्ताक आलमलाई प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दिए । नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा दिवंगत नेता आलमको पार्थिव शरीरमा उहाँहरूले पार्टीको झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेका थिए । श्रद्धाञ्जलिका लागि नेता आलमको पार्थिव शरीरलाई शनिबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा राखिएको थियो । नेता आलमलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दिन नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही पुगेका थिए ।
पार्टी एकतापछि यति धेरै नेता–कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पुगेको पहिलो पटक हो । तर अरू समयमा नेकपाको मुख्यालय रहने भनिएको तत्कालीन एमालेको धुम्बाराहीमा रहेको पार्टी कार्यालय सुनसान जस्तै हुन्छ । त्यस्तै तत्कालीन मओवादीको पार्टी कार्यालय भएको पेरिसडाँडा पनि सुनसान नै छ । तत्कालीन पार्टीका दुवै कार्यालयलाई नेकपाको कार्यालय बनाइएको छ । विगतमा आ–आफ्ना पार्टीका कार्यालयमा जाने गरेका नेताकार्यकर्ता अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
दुवैतर्फका सचिवालयका अनुसार तत्कालीन एमालेको कार्यालयमा एमालेका मात्रै नेता कार्यकर्ता जाने गरेका छन् । त्यस्तै माओवादीको कार्यालयमा माओवादीका नेता कार्यकर्ता मात्रै जाने गरेका छन् । तर जसका केही वैठकहरू भने दुवै कार्यालयमा भए । अहिलेसम्म नेकपाले पार्टी वैठक दुवै कार्यालयमा गरेको छैन ।
एकतापछि पार्टीका ठूला कार्यक्रम भएका छैनन् । पेरिसडाँडा पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव प्रल्लाद बुढाथोकीका अनुसार अध्यक्ष ओली एक पटक पेरिसडाँडा पुगेका छन् । अन्य नेताहरूमा माधवकुमार नेपाल र विष्णु पौडेल भने दुई तीन पटक कार्यालय पुगेका छन् ।
दुवैतर्फका कार्यालयमा अध्यक्ष महासचिवका कार्यकक्ष छन् । मुख्य नेताहरू नै कार्यालय नपुग्दा अन्य कार्यकर्ता पनि नआउने गरेको बुढाथोकी बताउँछन् । धुम्बाराही पार्टी कार्यालयमा पनि तत्कालीन माओवादीका नेताहरू कमै जाने गरेका छन् ।
अहिले मुख्य कामहरू धुम्बाराहीबाट हुने गरेका छन् । नेकपाका चिठीपत्र धुम्बाराही पार्टी कार्यालयबाट तयार भए पनि तत्कालीन माओवादी सर्कलका नेताहरू लागि वितरण गर्ने जिम्मा पेरिसडाँडाको भागमा पर्छ । एमाले सर्कलका नेताहरूको जिम्मा धुम्बाराही आफैँ गर्ने गर्छ ।
उदाहरण ३– संसदीय दलको कार्यालयमा नाम नेकपा तर काम पुरानै पार्टीका
तत्कालीन पार्टी हँुदा जहाँ–जहाँ संददीय दलको कार्यालय थिए, अहिले पनि त्यही छन् । ती कार्यालयमा नाम मात्र परिवतर्नन भएको छ । कर्मचारी पुरानै छन् । काम पनि पहिलाकै जस्तै छ । तत्कालीन माओवादीको संसदीय दलको कार्यलयकामा रहेका शाखा अधिकृत सिंहराज रुम्बाका अनुुसार दुवै पाटीका सांसदहरू कार्यालयमा आउने गरेका छन् । तर कार्यालयमा रहने अन्य कर्मचारीका अनुसार माओवादीका सांसदहरू मात्र आउने गरेका छन् । कहिलेकाहीँ संयुक्त बैठक भने त्यहाँ हुने गरेको छ । तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा पनि एमालेका सांसदहरू मात्र पुग्ने गरेका छन् । सासंदहरूलाई भेट्न आउने कायकर्ता तत्कालीन आ–आफ्ना कार्यालयमा आउने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभागृहमा पार्टी एकताको घोषणा चलिरहँदाभित्र र बाहिर कार्यकर्ताको उपस्थिति बाक्लो थियो । उपस्थित कार्यकर्ता उत्साहित थिए । तर विगतका दुई फरक स्कुलिङबाट आएका कार्यकर्ताबीच भावनात्मक एकताका लागि केही समय लाग्न सक्छ । तर, नेताहरू भावनात्मक एकता भैसकेको दाबी गर्छन् । तर नेताका भाषण र व्यवहार भने अलि फरक देखिन्छन् ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद पोखरेल भन्छन्– सबैको मन ट्याप्प मिलेको छ
हाम्रो पार्टी मिल्यो । त्यसपछि केन्द्रमा ३ तहका कमिटीहरू बनेका छन् । त्यहाँ कतै विवाद भएन । तलका कमिटीको एकीकरणमा गएका छैनाँै । त्यो भएर मन नमिलेको जस्तो देखिएको हो । जब सबै तहका कमिटी एकीकरण हुन्छन्, अनि सबैका मन मिल्छन् । केन्द्रमा सबै नेताहरूको ट्याप्प मन मिलेको छ । तपाईंहरू देखिरहनुभएको छ । अहिले कतै कुनै नेताहरूमा मनमुटाव छैन । सबै नेताबाट एउटै आवाज आएको छ । कुनै नेताको फरक छैन । सबै नेता एक साथ हिँड्नु भएको छ । सायदै यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि हो । तल्ला कमिटीमा अहिले मन नमिले पनि एकीकरण भएपछि सबैको मन मिल्छ र एक ढिक्का भएर अघि बढ्छन् ।-ratopati.com